LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem]
1 LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 14th May 2010, 4:38 pm
တည်နေရာ : ခ၀ဲျခံ ရန္ကုန္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-05-09
အစ်ကိုတို့ရေ ကျွန်တော်netword ကနေ ကို့ computer ကနေ တခြား computer ကို control လုပ်တာ password တောင်းနေတယ် ကျွန်တော့ computer မှာလဲ ဘားpassword မှလဲ မထည့်ထားပဲနဲ့ အဲ့ဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးပါလား ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by Fox on 10th August 2011, 3:53 am; edited2times in total (Reason for editing : Topic Title Added.)
2 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 14th May 2010, 4:57 pm
my computer>R-click>Manage>Local User and Groups>Users>Guest မှာ Password ၀င်နေလို ့ဖြစ်မှာပါ
Guest ကို Right click နှိပ်ပြီး Properties ကိုသွားပြီးတော့ check box ထဲကဟာတွေပြန်ဖြုတ်ကြည့်ပါ..
Password ထပ်တောင်းနေသေးရင်တော့... Guest ကို Right click နှိပ်ပြီး.. ကိုယ်ကြိုက်ရာ Password အသစ်သာပြန်ထည့်လိုက်ဗျို ့..
3 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 14th May 2010, 8:34 pm
ဒုတိယကျော်စွာ wrote: အစ်ကိုတို့ရေ ကျွန်တော်netword ကနေ ကို့ computer ကနေ တခြား computer ကို control လုပ်တာ password တောင်းနေတယ် ကျွန်တော့ computer မှာလဲ ဘာpassword မှလဲ မထည့်ထားပဲနဲ့ အဲ့ဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးပါလား ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
အခုပြောပြမှာကတော့ Remote Desktop Connectin လုပ်တဲ့ဟာ ကိုပြောမှာနော်
Control လုပ်ချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ User Name = Administrator (or) xxxxxx ; Password = xxxxx
User Name & Password ပေးရမယ်
Password က ပေးမှရမှာ မပေးရင်မရဘူး Remote လုပ်မယ်ဆိုရင် ပေးရမယ်လေ။
ဒုတိယကျော်စွာဆိုတော့ ခပ်လန့်လန့်ဘဲ ဘာလို့ ပထမကျော်စွာလို့မရေးတာလဲ ဒီထဲမှာ ပထမကျော်စွာ မရှိပါဘူး
4 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 14th May 2010, 8:44 pm
5 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 20th May 2010, 9:56 am
combot လားမ သိ ဝူး သုံး ပြီ းဖောက် လို့ရ တယ် ... သားလဲ သုံး တက် ဝူး.. ငါယောက်ဖက ငါ ချစ်ချစ် ကွန်ပျူ တာ ကို အဲ ဒါ နဲ့ဝင် စော် ပ လော် တီ သွား တာ .. အဲ ဒါ သုံး ပြီ းဖောက် ကြည့်
အော် ဒါ နဲ ့
ဟတ် တာ လား ... တရား ဝင် သုံး တာ လား .. တရာ ဝင် သုံး ရင် တော့ .. Remote လုပ် ချင် ရင် .. လုပ် မယ့် ဆက် မှာ .. အကောင့် တစ် ခု လောက် ဖွင့် ပြီး.. Admin မ ဟုတ် ရင် .. Power User လောက် တော့ User permission level ပေ ထား မှ ရ မယ်... မ ဟုတ် ရင် access လုပ် ရ တာ feel မ ရှိ လောက် ဝူး ... တက် တာ
6 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 20th May 2010, 3:32 pm
Remote desktop enable လုပ်တယ့်အချိန်တုန်းက password မရှိတယ့် user တွေ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တယ့်အကြောင်း notice လုပ်တယ့် pop out တစ်ခုတက်ပါတယ်။ သတိမထားမိလိုက်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ Windows ရဲ့ default policy အရကတော့ Null password (password မပေးပဲ) remote သုံးလို့မရပါဘူး။ သုံးချင်ရင် policy မှာပြင်ရပါတယ်။
Domain join ထားတာမဟုတ်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။ Group policy မှာ (gpedit.msc) မှာ ဒါလေးပြင်လိုက်ပါ။
Computer Configuration\_Windows Settings\_Security Settings\_Local Policies\_Security Options အထိသွား
Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only ကိုရှာ
Group policy မို့လို့ ပြင်ပြီးရင် restart လုပ်ရင်လုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် run box ကနေ 'gpupdate /force' လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါမှ effect ဖြစ်ပါတယ်။
User password မရှိပဲ remote desktop enable လုပ်တာ ဘယ်လိုစဉ်းစား စဉ်းစား မလုပ်သင့်တယ့်အလုပ်ပါ။
7 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem] on 24th May 2010, 2:36 pm
windows xp or vista ဆိုရင် နော် .. password ထား ကို ထား ပေး ရ မှာ နော် .... ကျွန်တော် တို့ရိုး ရိုး တန် းတန် းဆို ရင် password မထား ကျ ဘူး .. admin acc ကို .. ဒါ ပေ မယ့် .. အဲ ဒီ့ ဝင်တိုး တွေ က တော့ မ ရ ဘူး ... admin pass မထား လဲ တောင်း တာ ပဲ
8 Re: LAN မှာ Password တောင်းနေလို့ပါ [Problem]